၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇွန်လ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု၊ AnTuTu Benchmark အရ | Androidsis
Android လောကတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ AnTuTu ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ GeekBench နဲ့တခြားသူတွေနဲ့အတူဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချရသောစံနမူနာတစ်ခုအဖြစ်အမြဲတမ်းထင်မြင်ယူဆရခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်အထောက်အကူပြုအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ယူမှတ်ခြင်းအားဖြင့်မိုဘိုင်းဘယ်လောက်စွမ်းအားမြန်တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ထုံးစံအတိုင်း, ပုံမှန်အားဖြင့် AnTuTu သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လစဉ်အစီရင်ခံစာတစ်ခုသို့မဟုတ်စျေးကွက်တွင်တစ်လပြီးတစ်လစွမ်းအားအရှိဆုံးသောဆိပ်ကမ်းစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အရာအတွက်, ဒီအခါသမယတွင်ကျနော်တို့၏ထို့အပြင်သတိပြုပါနိုင်ပါတယ် ငါ NEX နေတယ်ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကတရုတ်ကုမ္ပဏီမှပုဂ္ဂလိကပွဲတစ်ခုတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ် ဤအချက် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားထင်ရှားသောအရာများရှိသည် may rank. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ဤစာရင်းကိုမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လတွင်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် AnTuTu သည်သြဂုတ်လတွင်တွေ့ရမည့်လာမည့်လ၏နောက်အဆင့်တွင်၎င်းကိုအလှည့်အပြောင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီနှစ်ဇွန်လအတွက်အင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေရှိတယ်။ AnTuTu Benchmark ရဲ့အဆိုအရ
စာရင်းထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့အတိုင်း၊ el Xiaomi က Black ကငါးမန်း အလွန်မြင့်မားသောရမှတ်နှင့်အတူစားပွဲပေါ်မှာ ဦး ဆောင်နေဆဲ 287.759ဒုတိယအဆင့်တွင် ၂၈၄,၂၂၇ မှတ်ရရှိခဲ့သည့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာဖြင့် Vivo Nex ကဲ့သို့သောအခြားအဆင့်မြင့်အမှတ်တံဆိပ်များကိုရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ OnePlus6တတိယအနေအထားအတွက် 282.275 အချက်များနှင့်အတူ။
အခြားပို့စ်များအဘို့, စတုတ္ထနေရာကသွားသည် Xiaomi က Mi 8 273.221 အချက်များနှင့်အတူထို့နောက် ၂၇၃,၁၅၂ ရမှတ်နှင့်အတူပဉ္စမစင်မြင့်ပေါ်တွင် Smartisan R1 ကနောက်လိုက်လိုက်သည် Samsung ရဲ့ Galaxy S9 ပို ဆsix္ဌမအရပျ၌ 262.561 အချက်များနှင့်တကွ, Xiaomi က Mi ရောသမ 2S အsevent္ဌမတွင် ၂၆၂,၃၉၆ မှတ်၊ အeight္ဌမတွင် Samsung ၂၆၁,၉၁၈ မှတ်၊ အeight္ဌမတွင် ၂၆၁,၉၁၈ ခု၊ Sony Xperia XZ2 နဝမနှင့်အမှတ်အတွက် 251.387 အချက်များနှင့်အတူ Nubia အနီရောင်မှော် ဒီအဆင့်၏နောက်ဆုံးရာထူးအတွက်အချို့သော 214.580 အချက်များနှင့်အတူ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » AnTuTu Benchmark အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ လုံး